थाईल्याण्डमा ज्ञानेन्द्र सक्रिय, गोप्य भेटवार्ता सुरु | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
थाईल्याण्डमा ज्ञानेन्द्र सक्रिय, गोप्य भेटवार्ता सुरु
काठमाडौं, २८ साउन । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिवेला थाईल्याण्डमा छन् । बैंकक बसाईको क्रममा पूर्वराजाले आफ्नो राजनीतिक भेटवार्ता बढाईरहेको स्रोतको दाबी छ ।ज्ञानेन्द्र दुई हप्ताका लागि थाइल्यान्ड पुगेका हुन् ।
एक महिनाको अन्तरालमा उनी पुनः थाइल्यान्ड उडेका हुन् । यसअघि असारमा उनी बैंकक पुगेका थिए । २४ साउनको दिउँसो थाइ एयरवेजको विमानबाट शाह थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेका हुन् । पछिल्लो समय उनको थाइल्यान्ड आवतजावत बाक्लिएको छ । त्यहाँबाट शक्तिकेन्द्रसँग सम्पर्क बढाएको चर्चा छ ।
नातिनीहरु बैंकमा अध्ययन गरिरहेकाले उनी बैंकक गइरहेको बताइन्छ । कतिपयले स्वास्थ्योपचारका लागि आवतजावत् बाक्लो बनाएको बताइरहेका छन् । तर, उनले त्यहाँबाट राजनीतिक सक्रियता बढाएको सूचना सत्तारुढ दलका नेताहरुसम्म पुगेको छ ।
थाईल्याण्ड बसाईको क्रममा शाहले कुटनीतिक भेटवार्तालाई पनि तिव्रता दिएका छन् । नेपालमा पूर्व राजालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै नसलबलाउन चेतावनी दिएपछि नेपालमा राजा फर्किनेबारे चर्चा तथा परिचर्चा हुन थालेको छ । पछिल्लो समय पूर्वराजाको निवासमा पुगेर चर्चित राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र सशांक थाईल्याण्डमा, गोप्य भेटवार्ता !
प्रधानमन्त्री ओली फेरि अस्पताल गए
काठमाडौं, २४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज हेमोडायलासिस गराउन अस्प्ताल पुगेका छन् ।
मानव अधिकार आयोगको गुनासो : सरकार नै गर्छ मानव अधिकार हनन
काठमाण्डौ । नेपालमा मानवअधिकार हननका घटना न्युनिकरण हुन सकेका छैनन् । सरोकारवाला निकायले बारम्बार सरकारलाई
नेपालको आर्थिक अवस्थमा सुधार भइरहेको छ : मुख्यमन्त्री राई
२४ मङ्सिर : मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल १४७ औँ स्थानमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र
अव्यवस्थित बसोवासको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ : मन्त्री अर्याल
२४ मङ्सिर : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित बसोवासको दिगो व्यवस्थापन
मानवाधिकार संरक्षण गर्न सरकारको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र भएमा सोको
संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गते बोलाउन सरकारको सिफारिश
काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकारले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी पुस ४ गते
वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धोका दिएको खुलासा
काठमाडौं, २४ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रस्तावित उपाध्यक्ष तथा सचिवालय
कालापानीमा मोदीको ‘रहस्यमय मौनता’
काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाल र भारतबीच २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि सुमधुर हुँदै गएको सम्बन्धमा पुनः
सागको सुखद समापन
काठमाडौं, २५ मंसिर । आगामी संस्करणमा पाकिस्तानमा भेट्ने वाचा गर्दै १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको
ऐतिहासिक बन्यो तेह्रौँ साग
काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तेह्रौं संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ